Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Wadahadalku Waa Isfahanka Labada Dhinac ee is Haya By Liban Kulmiye
Maqaal: Wadahadalku Waa Isfahanka Labada Dhinac ee is Haya By Liban Kulmiye
Posted by ONA Admin	/ January 21, 2018
Halganka Ogadenia waxaa lagu waayay hanado, halyeeyo, geesiyaal, birmagaydo caan ahaa, hanti iyo dhaqaale badan, ONLF waxaa ka go’an inay sida shucuubta caalamka ay shacabkeedu ka xoroobaan ku hoos noolaanshaha Gumaysiga waxayna si aan gabasho lahayn isaga diideen quudhsiga iyo in lagu dulaysto dalkooda hooyo, waxayna taa badalkeeda doorbideen inay halgamaan oo ay ku dhintaan geeri sharaf leh oo shihiid ah, ujeedadunatahay xornimo inay helaan oo kali ah, sidaas darteed waxaan rabaa inaan qormadan kaga hadlo wada hadalada la sheegayo ee dhex maraya gumaysiga Ethiopia iyo ONLF.
Horta wadahadalku waa udubdhexaadka isfahanka wuxuuna leeyahay heerar kala sareeya heerka ugu tayo wanaagsan ee ay dad uwada hadlaana waxaa laga soo saaray shuruudo dhawr ah, kolka shuruudahaas laga hadlayana waxa la raadinayo waa wadahadal uu ka dhalankaro natiijo u qalanta in ay ahaato xaqiiqo madhaafaan ah oo waxtar uleh bulshada.
Garashada aqoonta xogta iyo isfahanka ugu tayo wacan ama shuruudaha uu wadahadalka caynkan ahi u baahanyahay waxaa kamid ah qodobadan hoose, waxaana wanaagsan in la raaco markasta oo wadahadal laga qayb qaadanhayno.
1: Dhinacyada wadahadlaya waa inay haystaan fursad siman iyo madaxbanaani isu dheelitiran oo ay aragtiyahooda isku dhaafsan karaan.
2: In aan la adeegsan awood dhinaca kale ku dirqida wax aysan ku qanacsanayn.
3: In ay jirto isqadarin iyo kalsooni la isku qabo.
4: In dooda lagu dhiso cadayn iyo sababayn la aqbali karo.
5: In diyaar loo ahaado aragti dhinaca kale ka imaanaysa in ay badali karto tii hore ee la haystay.
6: In aan loo jabin wax aan la rumaysnayn iyada oo sabab uun xaqiiqada looga gaabsanhayo.
7: In wadahadalka loo raaco ama asal looga dhigo xeer la isla ogolyahay oo guud si hadii laysqabto loo gula laabto xeerkaas kadibna loogu wada qanco.
8: Helista xaqiiqada in aan lagaga maarmin dan gaar ah oo lagu jahaysan yahay.
9: In natiijada wadahadalku noqoto mid ay bulshadu ku qanacdo mar walba.
10: In aysan qolana qolada kale la maaganayn (dabin, wanjal hoose iyo khayaamo midna.
Waxaa dhab ah mar walba oo wadahadalku buuxiyo qodobadan in loo dhawaanayo natiijo dhinacyada dooday u wada leh xaqiiqo ay u siman yihiin raalina ka wada yihiin. Xubnaha wadahadlaya ayay kol walba ku xidhantahay heerka ay wadahadalkooda la doonayaan iyo ujeedada ay ka leeyihiin oo laga rabo inay keento guul umadeed, farxad shaqsiyadeed iyo qanaaco xoogbadan wixii kasoobaxa natiiyada wadahadalka.